Thiago Silva oo rajaynaya inay Champions League isku wajihi doonaan Kooxda AC Milan – Gool FM
(Milan) 11 Maajo 2021. Daafaca Kooxda Chelsea ee Thiago Silva ayaa rajanaya inuu AC Milan ku wajihi doono tartanka Champions League xilli ciyaareeka soo socda, laakiin wuxuu qiray inay ahayd wax laga xumaado inuu la arko ciyaartoyda reer Brazil ee ka tirsan Juventus oo guuldarro kala kulantay Rossoneri.
Daafacan reer Brazil ayaa saddex xilli ciyaareed iyo bar ku qaatay Kooxda AC Milan ka hor inta uusan u dhaqaaqi naadiga PSG sanadkii 2012-kii.
Weligiis kama hor imaan Rossoneri tan iyo markaas, laakiin waxa uu rajeynayaa inuu sameeyo middaas xilli ciyaareedka soo socda.
36-sano jirkaan ayaa u sheegay Sky Sport Italia: “Waxaan ka fikirayay waqtigan tan iyo markii aan ka tagay Milan, waxaan ka fakarayay u soo bixitaanka Milan ee Champions League sanad walba,”
“Xilli ciyaareedkaan waan dhownahay, waxaan arkay ciyaartii Juventus, waana ka yara murugooday ciyaartoyda reer Brazil ee ka tirsan Juventus ’: Danilo, Alex Sandro, Arthur, xitaa Gigi Buffon, waxaan ku wada ciyaarnay Paris.
“Laakiin Milan waxay ciyaartay kulan weyn, waxayna u qalantay inay guuleysato, waxaan qabaa inay u qalmaan inay u soo baxaan Champions League, waxay soo qaateen xilli ciyaareed aad u wanaagsan, wayna u qalmeen wixii ay ku qabteen lix iyo todobo bilood.
“Weli waxaan ahay taageere Kooxda Milan ah, waxaan rajeynayaa inaan wajihi karo Milan oo aan ku laabto San Siro oo ah garoon gaar ii ah.” ayuu hadalkiisa ku daray Thiago Silva.